ငွေရှာကြသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » ငွေရှာကြသူများ
Posted by ေမာင္ ေပ on May 29, 2011 in Events/Fundraise, Myanma News | 15 comments
နံနက်ခင်း ဂျာနယ် အမှတ် ၃၉၈ တွင်ပါသော ဆရာ ကိုကြည်မင်း ၏ ” ဪ..ဝမ်းတစ်ထွာ ” ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီး ထပ်ဆင့်ခံစားမိပါသည် ။ ကိုကြည်မင်း အဓိက ရေးသော အကြောင်းအရာ မှာ လူတွေ လုပ်စား တတ်ကြပုံ ၊ အဆိပ် မိ သေသော ခွေးသေ ကို အမှိုက်ပုံတွင် ပစ်ထားရာကို ကောက်ယူ ပြီး ဝက်အူချောင်း ၊ ကြက်အူချောင်း ၊ ဆိတ်သားခြောက် ၊ အမဲခြောက် စသည်ဖြင့် လုပ်ရောင်းကြပုံ ကို ရေးသားထားပါသည် ။ အန္တရာယ် ရှိသော အသား ကို ညာရောင်းခြင်း ။ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိသည်မှာ ထို ခွေးအသေ ကို လုပ်စားသူသည် ထိုအတွက် ပိုက်ဆံ မည်မျှ ရမည်နည်း ။ ထိုရသော ငွေသည် တစ်ဘဝစာ ဖူလုံသွားမည်လော ။ ထားပါ ။ တစ်လစာ စားသောက်လောက် အောင် ဝင်ငွေ ရသည် ထားပါစို ့။ ထို ဝင်ငွေ အတွက် တစ်ဘက် စားသုံးသူများ အနက် မှ လူသုံးယောက် အသက် သေသည် ဆိုပါစို ့။ ညီမျှခြင်း ချကြမည် ဆိုလျှင် ” တစ်လစာ စားစရိတ် = လူသုံးယောက် ၏ အသက် ” တန်ပါရဲ ့လား ။ ကျွန်တော် တို ့ယခုလို တွေ ့မြင်နေရသည့် အန္တရာယ် များ ကို ရေးသား နေကြသော်လည်း ထို ဒုစရိုက် မကောင်းသော အလုပ် ကို လုပ်ကိုင်နေကြသူများသည် ဤ စာ ကို ဖတ်ကြမည် မထင် ။ စာဖတ်ရ ကောင်းမှန်းလည်း သိကြမည့်လူတန်းစားမျိုးများ မဟုတ်လောက် ။ သို ့သော် သူတို ့လုပ်ရောင်းသော အသား ကိုမူ သူတို ့ပြန်စားမည် မဟုတ်တာ ကတော့ အသေအချာ ပင် ။ သို ့ဆိုလျှင် ဤဖြစ်ရပ် များ ကို မည်သို ့ကာကွယ် တားဆီးကြမည် နည်း ။ ကျွန်တော့် ဆန္ဒ အရ ဆိုလျှင် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်လောက် နှင့်တော့ မတန် ဟု ထင်ပါသည် ။ မှတ်လောက် သားလောက်အောင် လူသိရှင်ကြား ကြေငြာ သတင်းထုတ်၍ သေဒဏ် လို ပြစ်ဒဏ်မျိုး ပေးသင့်သည် ဟု ထင်သည် ။ သို ့မှလည်း မည်သူမှ နောင်ကို မလုပ် ရဲ မလုပ်ဝံ့ လောက် မည် မှတ်သွားလောက်မည် ဟု ထင်ပါကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါသည် ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
အတွေးကတော့ ရှယ်ပဲ.. လန်ထွက်နေတာပဲ..
တိုက်ဆိုင်လို့.. အခု ဝက် နားရွက်ပြာ တွေဖြစ်နေတယ်။
တနေ့က သမိုင်းဘက်ကို ရောက်တော့ ပြောတာ ကြားမိပါ၏
ဝက်သား ၁ဝသား ၁၅ဝ နဲ့ ရောင်းနေတယ်တဲ့.. သူတို့ ပြောတာတော့ အစိုးရက ကျန်းမာတဲ့ တံဆိပ်ရတဲ့ ဝက်ပါတဲ့.. ဈေးပေါလွန်းလို့ မယုံနိင်စရာပါပဲတဲ့။
စားပြီးရင်တော့ ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ.. မသိဘူး။ တချို့များတော့ ကြက်ငှက် တုတ်ကွေးဖြစ်မှာ ကြက်သားစားရတာ ဆိုသတဲ့.. အခု ဝက်နေမကောင်းမှ ဝက်သားစားမှာတဲ့.. ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
သူငယ်ချင်းတယောက်လည်း မေ့ပြီး ဝက်ကလီစာ စားမိတာ.. အထက်လှန် အောက်လျှော ဖြစ်နေလို့ ခပ်မျော့မျော့ပါပဲ။
ခွေးလေခွေးလွင့်တွေကို… စံနစ်တကျဖမ်းသတ်ပြီး.. ခွေးသားစားတဲ့ နိုင်ငံတွေ.. တင်ပို ့ရောင်းချသင့်တယ်..။
ရတဲ့ငွေရဲ့ ၁ဝရာနှုန်းကို… ကလေးလေ..ကလေးလွင့်တွေဘဝ မြှင့်တင်ရေးမှာ သုံးသင့်တယ်..။
မြန်မာတွေထဲကလည်း… စားချင်တဲ့သူ ဝယ်စားပစေပေါ့..
သတ်မှာဖြင့်လည်း သတ်လေဗျာ၊ ကျုပ်တို့ကြောင်တွေ ညဖက်လမ်းသလားရင် ဆိုက်ကားသမားရန်ကြောက်ရ၊ ခွေးလိုက်လို့ပြေးရနဲ့ အနည်းဆုံး တရန်တော့ ရှင်းသွားတာပေါ့။
“သူတို ့လုပ်ရောင်းသော အသား ကိုမူ သူတို ့ပြန်စားမည် မဟုတ်တာ ကတော့ အသေအချာ” ပင်ဖြစ်သော်ငြား “သူတို ့လုပ်ရောင်းသော အသား ကို စားသူများတော့ ဖြစ်မည် ထင်ပါ၏”
သေချာသည်ကတော့ အသား စားသုံးသူများ ဖြစ်မည်ထင်ပါ၏။ ထိုအသားများကို စားသည့်အတွက် မြန်မာပြည်သူ/ပြည်သားများ မည်သည့် ရောဂါဖြစ်ကြသည်ဟု ထင်ပါသနည်း? ကိန်းဂဏန်းများ မထုတ်ပြန်ခြင်းကြောင့်လော? ထိုသို့ဆိုလျင် ပြည်သူများကြားမှ အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများ ကြားရပါ၏လော? ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်မူ မကြားဖူးပါဟု ဆိုရပေမည်။ ယနေ့ခေတ် အိမ်ရှင်မများ (ယခုုအခါ ပိုမိုများပြားလာသော အိမ်ရှင်ထီးများကို မဆိုလို) တစ်နေ့တာ ဈေးဝယ်ထွက်သည့်အခါ အသား၊ ငါးတန်းသို့ ဈေးစုံစမ်းရုံသာ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ကြပြီး အဆုံးတွင်မတော့ ဈေးအတွင်းဘက်အကျဆုံးတွင်ရှိသည့် ခေါင်းရွက်၊ ဗျက်ထိုး ကိုယ်ပိုင်စိုက်ခင်းများမှ လာရောင်းကြသော အသီးအရွက်အသည်များထံသို့သာ ခြေဦးလှည့်၊ အပြန်တွင် ငါးပိ၊ ငါးခြောက်ရောင်းသော ဆိုင်များမှ အရောင်များများ၊ ဖွဲနုများများ ရောထားသော၊ ငါးအပုပ်များကို ရွှံ့နုအနည်းငယ်ရောထားသော ငါးပိရည်ကျို (ငါးပိရည်ချိုမဟုတ်တော့ပါ) ဆိုင်များမှ တစ်နေ့တာအတွက် အသားဓါတ် ပြည့်စုံစေနိုင်ရန် ၁၀ဝ ဖိုး၊ ၂၀ဝ ဖိုးဝယ်နေရသော မြန်မာအိမ်ရှင်မများအဖို့ မိမိလင်သား၊ သားသမီးများ အသား၊ ငါး ဝဝလင်လင် စားသုံးစေနိုင်မည့်သတင်းကောင်း၊ သားသမီးများ ထမင်းဝိုင်းတွင် မျက်နှာပြုံးရွှင်နေစေမည့် သတင်းကောင်းဖြစ်မည်ကို ငြင်းလိုကြပါသလော?
ုငြင်းလိုကြ ငြင်းကြပါကုန်၊ မြန်မာလူမျိုး အများစုကို ကြည့်လျင် နိုင်ငံတစ်ကာ အရပ်အမောင်းမှီသူများ ရှားပါးလှပါ၏။ ပြောရလျင် အသားဓါတ် ချို့တဲ့ကြသောကြောင့်ဟု ယေဘူယျ ပြောရပေမည်။ သားသက်လွတ်(သက်သက်လွတ်မဟုတ်သူများ) ပြောစကားအရဆိုလျင် ပဲမျိုးစုံကို စားလျင်လည်း အသားဓါတ်ရကြပါသည်။ သို့သော် စားတော်ပဲ(ပဲပြုပ်) ကို ထမင်းကြမ်းနှင့် စားအုံးဆီရွှဲရွှဲ စားနေရသော အခြေခံအလုပ်သမားများပင် ၅ ကျပ်သား ၂၀ဝ ခန့်ပေးကာ စားနေရသောကြောင့် အဘယ်ကဲ့သို့သော အသားဓါတ် ပြည့်စုံနိုင်ပါတော့မည်နည်း။ ယခုအချိန်တွင် ဝက်သား တစ်ဆယ်သား ၁၅ဝ ဖြစ်နေတယ်ပြောစကားအရတော့ ဝယ်စားသင့်သည် ထင်မိပါကြောင်း။
တစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လဲ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်ခံ ပြုစုရမယ်၊ အသားဓါတ်ချို့တဲ့ရင်လဲ အာဟာရပြတ်မယ့်လူတွေတူတူ ပေါများတုံးအခိုက်အတန့် အသားတွေကို မုန်းလောက်အောင် ဝယ်စားသင့်ပါကြောင်းနှင့် ဝက်တိုင်း ရောဂါမဖြစ်သလို လူတိုင်း Side Effect မခံစားရနိုင်ပါကြောင်း…
(ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လဲ ပြန်ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဟိုဟာပြည်မှာ ဝက်သားမစားခဲ့ရသမျှ ဝက်စတူး၊ ဝက်ကလီစာ၊ ဝက်သားဒုတ်ထိုး၊ ဝက်သားနီချက်၊ သုံးထပ်သားဆီပြန်၊ ဝက်ခြေထောက်ဟင်းချို၊ ဝက်ခေါင်းသုပ်၊ ဝက်ကုန်းဘောင်ကြီးကျော်၊ ဝက်သားစဉ်းကောချက်၊ ဝက်အူချောင်း၊ ဝက်သားလုံး၊ ….. အစရှိတာတွေကို ဝဝလင်လင် စားသုံးမည် ဖြစ်သည့်အကြောင်း……..
ဝက်သားကို သေသေချာချာ နူးအောင် ချက်ရင်တော့ စားလို့ရမရ သေချာတော့ မသိဘူး။
သေချာ ကျက်အောင် ချက်ပြီးစားလို့ရတယ် ဆိုရင်တော့ စားသင့်ပါတယ်။
မဲတူးချိတ်နေအောင် ကျော်၊ ချက် ထားမယ်ဆိုရင် စားနိုင်ပါကြောင်း……
ဝက်သား သတင်း ဒီနေ့ပဲ မအူပင်က ပြန်လာတဲ့ လူဆီက ကြားတယ်။
အော်လံနဲ့ မြို့ထဲမှာ လိုက်အော်နေတယ်တဲ့…
ဝက်သား ရောင်းသူ ထောင်ဒဏ် ၃နှစ်
ဝက်သား စားသုံးသူ ထောင်ဒဏ် ၁နှစ်
သတင်းပေးသူ ငွေ ၅၀၀ဝ ဆုချီးမြှင့်မည်။
ဝက်သားတွေ မရောင်းရတော့ ဝက်သေတွေကို မြစ်ထဲ လွတ်ပြစ်တာ မြစ်ထဲမှာ ဘောလော နဲ့ ဩတိုက်နေတာပဲ ပြောတယ်။ အိမ်မှာ မွေးတဲ့ ဝက်တွေ ဆိုလည်း ဖမ်းသတ်ပြီး မြစ်ထဲ ပစ်တယ် ဆိုလား။
မြစ်ထဲ ပြစ်တာကတော့ သိပ်မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပဲ။ ငါးကတွေကတော့ ပွဲတော် တွေ့နေလောက်ပြီ။
တော်ကြာ ငါးဆူးတောင်ပြာ ရောဂါဖြစ်ကုန်ရင်တော့ ဒုက္ခ
ဒီလိုပါပဲ ပြောနေကျတာ ဖြစ်တာကနဲနဲ ပြောနေတာကများများပေါ့။
မကောင်းသတင်းဆို အရမ်းမြန်တယ်၊ကောင်းသောသတင်းဆို တော်တော်နဲ့
ဘာအသားပဲဖြစ်ဖြစ် မစားချင်ရင်မစားပါနဲ့၊စားနေသောလူတွေကိုစိတ် အနှောင့်ယှက်
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ရန်ကုန်က ဈေးတွေမှာ အခုထိ ဝက်သားရောင်းနေတာ မြင်တွေ့နေရစဲပါပဲ။
ယနေ့ မေလ ၃၁ရက်နေ့ ၂၀၁၁ မြန်မာ့ အလင်း သတင်းစာ မှာတော့ ဝက်နားရွက်ပြာ ရောဂါ အတွက် ပညာပေးတဲ့ သတင်းတွေ ပါတယ်။ သတင်း ၃ခုပါလာတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကောလင်းမြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း မှော်ဘီမြို့.. ဆိုပြီး သတင်း အပိုင်း အနေနဲ့ ၃ခု ပါလာတယ်။
တော်ယုံ ကိစ္စဆို သတင်းစာထဲ မပါတတ်ဘူး။
အားနည်းသူကို နိပ်ကွပ်လို စိတ်နဲ့ ပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူး ကျန်းမာရေး အသိရှိစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ။
စားချင်းမစားချင်းကတော့ ကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေး မစားပါနဲ့လို့ ဘယ်သူမှ မကန့်ကွက်ပါဘူး အိမ်မှာ ချက်တဲ့ ဟင်း ဘယ်သူမှ ဟင်းအိုး လှန်ပြီး လာမကြည့်ဘူး။
စားနေတဲ့ သူတွေကို သနားလို့ မသိပါစေနဲ့ ဆိုပြီး ဖုံးကွယ်ထားပေးရမယ် ဆိုရင်တော့ အားလုံးသေမှ မစားသင့်ဘူး ဖော်ထုတ်သင့်တာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး ထင်တယ်နော့။
ကြက်တုတ်ကွေး ၊ငှက်တုတ်ကွေး ၊ ဝက်တုတ်ကွေး၊ ………..တုတ်ကွေး ၊ နောက်ဘာတုတ်ကွေးတွေလာဦးမလဲမသိဘူး၊ ဪ… ဒုက္ခ၊ဒုက္ခ။
သတ်သတ်လွတ်စားကြပါလားဟင် …. ကြက်ငှက် တုပ်ကွေးလည် းကြောက်စရာမလို သလို ၊ ဝက်နားရွက်ပြာလည်း ဒုတ်န့် ကဲ ပဲ … ။
တစ်ချို့ဆို ကြောင် အမဲရောင် စစ်စစ်လေ ဖမ်းတယ် … ဆေးဖော်ဖို့တဲ့ … ဘာဆေးလဲတော့မသိဘူး … ဟိုနေ့က ဝက်သားကြေးအိုး QQ လသာ မှာသွားစားတာ … ယင်ကောင်ကြီးပါလာတယ် … ငရုတ်သီးမှတ်ပြီးစားမလို့ပဲ … ပြီးမှ သေချာကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လေလို့ကြည့်လိုက်မှ ယင်ကောင်အသေကြီးတော့ … ဒါနဲ့ ဆက်မစားတော့ဘူး … အခုလည်း တရုတ်တန်းက သာကူကြိုသောက်နေတာ ကုန်ခါနီးမှ ဆံပင်ဖြူအရှည်ကြီး ပါလာတယ်
နည်းနည်းလောက် ပြောချင်ပါသည် ။ သည် ပို ့စ်ကလေး ကို တင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က
ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာလေး ကို တင်ပြထားတာပါ ။
အသား စားဖို ့မစားဖို ့ဆရာ လုပ်ထားတာ မဟုတ်ရကြောင်းပါ ။ ဒီလို လူတွေ ရှိပါတယ် ဆိုတာ ကို သတင်း ဝေမျှ ချင်တာရယ် ။ ကျွန်တော် စဉ်းစား မိတာ ရယ် ကို ပေါင်းပြီး ရေးပြထားတာပါ ။ အခုလို ဖတ်ပေး တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။